2 0 1 7. Jacaylka, CADDAALAD iyo iimaanka. 2 0 1 8 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
In 2017 iyo bilowgii sanadka, waxaan doonayaa in aan marka hore ka hor inta uusan ka qabashada article muhimka ah ee jeer apocalyptiga aanu la kulma waqtiga xaadirka ah waxaad oo dhan, walaalahayga aan jeclahayow oo Walaalo ah Masiixa iyo akhristayaasha blog jeclaa, Rabitaan aan sannadkii 2017 ku faraxsan New.
Qof walba A, waxaan rajeynayaa in Ilaah jirrabaadda oo gargaar ka iska dhawraa gaar ahaan isgoyska ee sanadkan, 2017.
Waxaan ilaahay ka baryaynaa in uu idin siinayo xoogga inuu wajaho dhibaatooyinka nolosha in dhawr sano iyo aad u badan oo muhiim ah yihiin.
Ilaah ha kaa siiyo oo aad caafimaad. Waxa ay u ogolaataa in aadan ka maqnaan daruuriga ah iyo adiga iyo mariyo siinayaa taageerada iyo jacaylka at fursad kasta.
Waxaa laga yaabaa inaad joogto gudahood nolosha ee buugga si aanay u daran Beentoodii cadhada Ilaah in si tartiib tartiib ah ku soo degaa dunida sanado badan.
Love, Law iyo Faith
Ogsoonow in this article Love, Law iyo Faith dhameystirta maqaalka:
2017 SHAN MUDNAANTA
Waxaan gabi ahaanba waa in ay ogaadaan in Love, Law iyo Faith jira saddex xubno muhiim ah oo jidka Christian nolosha iyo karaa in wejigii Ilaah inuu naga badbaadiyo ama ina eedayn for daa’in.
Si loo fahmo arrinta waxa ay u muuqataa mid waxtar leh in la sameeyo xasuusin yar oo ku saabsan jeer aannu ku dhex nool.
Tan iyo markii 14 May 1948, sidii aan mar hore sheegay in marar badan oo cadeeyay in blog ah, waxaan galay muddada kitaabiga ah in dhamaadka waqtiga.
Xilligan waxa kitaabiga ah in dhamaadka waqtiga qaadataa meel ka badan qarni hal.
Waxaan leenahay xaqiijin ku sugan Injiillada (gaar ahaan Matthew 24 Link: End of Days ), kaas oo sidoo kale xusid mudan in Ciise Masiix jidh ku laaban doonaa Earth ka hor dhamaadka qarnigan la soo dhaafay ay halkaas boqor noqday on aadanaha for kun oo sano. Kun The .
Sida aan ka arki kartaa, muddada jeer dhamaadka waa horusocod ee dhibaatada, sida xanuunka dhalmada.
1 Tesaloniika 5: 3
Waayo, waxaad naftaada u garanaysaan inay maalinta Rabbigu waxay u iman doontaa sida tuug habeen ah. 3 Markay leeyihiin, Waa nabad iyo salaamad, Markaas filashola’aan halaaggu ku yimaado, sida xanuunka foosha ku dul qof dumar ah oo uur leh, oo iyagu ma baxsan doono. 4Laakiin walaalayaalow,, gudcur kuma jirtaan in maalintaasu idiin qabato sida tuug oo kale , …
dhammaadka wakhtiga The xanuun noqday xoog iyo joogto ah sida aan ka arki kartaa maalin kasta.
News , (Wars, dagaallo hadalhayntood, socdaalka, argagixisada iyo jihaadka waa headlines dhammaan warbaahinta) xanuunka aadanaha , (baabba ‘, amni, saboolnimada, masiibooyinka, cudurada, rabshadaha iyo khasaare ee qiimaha u noqday khataraha dabiiciga ah ee nolosha) eexanuun nolosha xoolaha (Dead sharrixin by malaayiin sanad kasta oo adduunka ah tan iyo 2008 si ay kaluunka, shimbiraha iyo xoolaha kale ee duurjoogta iyo qoyska) tag lama dareemo, u baahan sharaxaad, warbixinta warbaahinta Minima iyo xanuun Dhulka (sunaami, roobabka mahiigaanka, Earth ruxmanayaan, duufaanada, daadadka, dab iyo duufaan noqonayaan iyo caadi ahayn) waxaa loo aqbalo by badan sida Cadaab riwaayado laakiin caadi.
set ee dhan xanuunnadan ay xitaa haddii ay ka heli karaan sharaxaad qaar ka mid ah si gooni gooni ah, hase ahaatee u sameeyaan oo dhan waa caadi ahayn oo waxaa ku xusan sida mid ka mid ah Aayaadka ku dhawaaqay dhawaan imaatinka Rabbigeenna Ciise Masiix ee Kitaabka Quduuska ah. Oo ilaa xadka of xanuun oo dhan, kuwaas oo si aad u wanaagsan ayaa xaqiijiyay wakhtigaas soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix waa mid aad u dhow.
na Inkasta oo aannu garasho u leh wakhtiyada dhamaadka ogolaan in la caddeeyo in Qarniganu ma idlaan doono ka hor inta Ciise Masiix jidh ahaan in Earth laabtay boqornimadiisa kun oo sano oo dhamaado kun oo sano ka dib oo ay xukun kama dambaysta ah. ( Xukunka ugu dambeeya uu noqon doono dhamaadka nin dhiman. Qaar ka mid ah waari noqon doonaa sharciga Ilaah iyo dadka kale ee hoos weligiis sharciga arooryadow hoos).
Inkastoo in aan ogaanno in xanuunka noqday nin aad u xoog iyo joogto ah.
aan ninna odhan karin goorta celinta ee ammaanta Rabbigeenna Ciise Masiix doono.
Waxaan ognahay in ee Kitaabka Quduuska ah waqti qarniga waxaa hayeyna in mudo ah 40 sano, laakiin 70 sano iyo xataa 80 sano iyo sidoo kale 120 sano ugu badan ee nolosha ee Bilowgii 6: 3
Dabcan iyadoo ay jiraan dhibaatooyinka nolosha iyo heerka xanuunka, Ilaah ka dhigi kara noo sugin ilaa 2068 (1948 + 120 sano) soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix.
Ciise Masiix wax aad muhiim u ah ayuu yiri, » Anigu waxaan ahay Alfa iyo Oomeega, kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya, bilowgii iyo dhammaadka » erayadani waxa ay sheegay in saddex jeer wax la mid ah ka duwan shaaca ka qaaday xaqiiqda ah muhiimada weyn oo gaar ah.
xukun Tani waa mid aad u faa’iido badan xitaa lagama maarmaan ah in lagu daro Chapter 24 of Matthew in la fahmo waxa muddo doono soo celinta Rabbigeenna Ciise Masiix.
In cutubka 24 ee Matthew Ciise sharxayaa waxa dhacaya marka qarnigan ugu horeysay oo dhalashada waa biloowga ah ee kiristaanka ah (isagu wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee) iyo waxa dhici doona farcanka soo dhaafay ka hor inta uu ka soo laabtay. (Waxaa sidoo kale jiri doona ugu dambeeyey). Taas macnaheedu waa in uu ku soo laabtay ka nimcadu dhamaystiran oo sidaas daraaddeed qofna ma badbaadi doonaa jacaylkiisa iyo faya in si ay u badbaadaan waa tegi doonaa iyada oo loo marayo Xeerka.
In cutubka 24 ee Matthew this, Ciise sii sheegay burburinta macbudka Yeruusaalem. Oo toddobaatan sano ka qaateen meel baabba ‘ah macbudka ku sii Ciise Masiix.
Haddaba, waxaan u garan karaa in marka Ciise wuxuu ka hadlayaa qarnigan ku jirta aayadda 34 ka mid ah cutubka 24 ee Injiilka Matthew ee
34 Runtii waxaan idinku leeyahay, Qarniganu ma idlaan doono, in waxan oo dhan ayaa ku dhacay.
Kanu waxaa weeye qarnigii a of 70 oo sidaas daraaddeed innagoo og in calaamadaha ugu horreeya ee jeer dhamaadka waa May 14, 1948, soo laabashada Ciise Masiix waa in ugu dambayn May 13, 2018.
Dabcan hab sahlay waxaan odhan karaa in soo laabashada this ee ammaanta Rabbigeenna Ciise Masiix, waayo, 2018 badan tahay xisbiga Easter on 2 April 2018.
Waxaa suurtogal ma aha oo xitaa dhici kara, laakiin ka fog qaarkood sababtoo ah mustaqbalka iska leh Ilaah oo keliya.
Sida qof walba uu arki karin ka blog ah waxaan si joogto ah u beegsan muddooyinka qaar ka mid ah wakhtigaas u muuqdaan in ay la xiriira wax sii sheegidda Bible Darteed soo laabtay Rabbigeenna.
Inkasta oo jeer baan beegsaday ma ahaayeen kuwa uu ku soo laabtay ammaanta, waxay habase yeeshee waxa ay waqtiyada adag ee aannu ku Church iyo iimaanka. Waxa xusid mudan in 2015 la dhawaaqo dhamaadka Pope François September at Cathedral St. Patrick ee USA.Xaggee buu hoos onkod of sacab in la Wadho Ciise Masiix ahaa aadanaha a failure sheegtay. Link .
Ujeedada blog this ma aha inuu u muujiyo taariikhda soo laabtay Rabbigeenna iyo King Ciise Masiix laakiin in ay ogaadaan in this soo laabto waa hubaal. Waa qarnigan. Oo waa dhow in view of baaxadda calaamooyin iyo oofinta waxsii Kitaabka Quduuska qorsheeyay dhamaadka waqtiga.
Anigu waxaan uun ahay kuwa wax ku wacdiya ah ku dhawaaqay soo laabashada Rabbiga ku jira qalbigayga iyo naf.
My gool ma aha inay iska iibiso warqad inkastoo aan qoray laba buug oo ku saabsan Ilaah iyo aadanaha. (Marka hore ka, ku soo noqo Wacdiyuhu wuxuu Boqorka , labaad France, ilbaxnimada iyo miyigii Jamhuuriyadda )
My Hadafkayagu waa in qof kasta u diyaariyaan karaan dib u celinta ah ee Ciise Masiix si ay u badbaadaan oo weli ka diiwaan gashan kitaabka nolosha oo ay ugu dhakhsaha badan ay gaaraan waara, Ilaah iyo ma la arooryadow.
Haddii aan malo ah soo laabashada Ciise Masiix Easter April 2, 2018waxaa caddaynaya in ay taariikhda by Ilaah ka abuurniinta dunida u soo laabashada Ciise Masiix doortay inuu u taliyo Dadka inta lagu guda jiro kun oo sano in aan Qiyaamaha gaar ah. Sidaas daraaddeed waxaan leenahay 15 bilood in ay sugaan.
Taas macnaheedu waa in kuwan iyo toban bilood noqon doonaa bilaha ugu muhiimsan ee nolosha.
kuwaas oo shan iyo toban bilood ka dib waannu badbaadi doonnaa ama cambaareeyay.
Kuwa badbaadi doontaa by Jacaylka
Tan iyo markii ay ka tageen oo Ciise Masiix waxaa jira laba kun oo sano, waxaan ku jiraan xaalad nimcada.
Taas macnaheedu waa in kuwa loo baabtiisay, kuwaas oo aqbalay Ciise Masiix sida Badbaadiyeheenna ah, kuwa toobad keena oo dembigiinna ee ay sameeyeen, cafis ilaahay weydiinaya dhex salaadda iyo maintiennes oo la xidhiidha ruuxa abuuraha.
Haddii ay sii-hoosaysiiya nolosha iyo daryeelka si loo caawiyo dadka kuwaas oo u baahan kaalmo.
Sidaas haa! Waxay yihiin Masiixiyiin, ay qayb ka mid ah Church of Ciise Masiix yihiin iyo aad loogu balan qaadayo in la badbaadiyey by jacaylkiisa. Bal eeg article gaar ah: Dare Faith ee Ilaah iyo Ciise Masiix
Waxay deggan dhulka inta lagu guda jiro Millennium.
Kuwa badbaadi doontaa by Law ah
Qaar badan oo ka arki guuto yihiin kuwa ku nool nolol caadi ah, ma doonaya in ay samayn doonaa waxyeello dadka kale, laakiin si fudud ku nool isagoo ka Jaahil ah ee jacaylka Ciise Masiix waa badbaadi doonaa, waayo, qaar ka mid ah (hal kun oo sano ka dib) by Act of Ilaah xukunka final oo dhintay oo dhan waa la bixin doonaa oo Ilaah xukumi sidii ay shuqulladoodii ahaayeen.
Kuwa badbaadaya by Faith
Masiixiyiinta qaar ayaa ku badbaadiyey Love Ciise Masiix oo mar kale ku dhashay! Ie oo Ilaah ka codsaday in hanuuniyo noloshooda, inay u sii xun iyo jirrabaadda ka.
Horumarinta nolosha ee Love Ciise Masiix iyo in guud ahaan iyo waadaxa ah ee Talo Saaro Eebe, la hubiyo in, sare iyo kuwa kibirka madaxa ah in ay dadka Masiixiyiinta ah ee gaar ah dhamaadka waqtiga.
All kuwa Masiixiyiinta ah kuwaas oo difaaci kiniisadda oo aan rabshad, mararka qaarkood noloshooda qatar in ugu dhakhsaha badan ku dhawaaqo boqornimadii Love on Earth la soo laabashada Ciise Masiix.
All kuwa Masiixiyiinta ah kuwaas oo naftooda ay u siiyo Ciise Masiix by caawinta Masaakiinta, kuwa buka, oo saboolka baahanna iyo kuwa xagga ruuxa waa baadi.
All kuwa Masiixiyiinta ah kuwaas oo waxaa la badbaadiyey by jacaylka Ciise Masiix oo ah markhaatiga ku barakoobi doonaan Ilaah iyo Ciise Masiix.
Inta lagu guda jiro kuwaas oo shan iyo toban bilood arooryadow heli doontaa duurjoogta ah oo ka dhacay aadanaha xooggiisii oo dhan.
Waxaad fahamsantahay in jirrabaadda wuxuu noqon doonaa xoog leh oo weyn iyo waxa ay noqon doontaa mid aad u adag at dhan in uu horay u socdo nolosha iyo iimaanka serenely.
Sidaas daraaddeed waa in aad fahamsanahay in arooryadow waa boqorkii dalka khayaal iyo in waa in aan had iyo jeer u falanqeeyaan dhacdooyinka iyo falalka si ha naga tegin xanniban.
Waxaa wanaagsan in la fahmo in horjeeda jacayl ma aha had iyo jeer neceb laakiin mararka qaarkood isu jeclahay!
soo horjeeda ee Sharciga ma aha had iyo caasinimo, laakiin laftiisa mararka sharciga.
soo horjeeda ee aanu rumaysadkaagu waa had iyo jeer mulxidnimo laakiin iimaanka laftiisa.
Sidaas awgeed, waxaan si fudud u tagi karo noo Doqon haddii aan si taxaddar ahaayeen.
Fahmaan in Waayo, Ilaah ma jiro jacayl ma aan sharciga lahayn, sida aan sharci jirin oo aan jacayl .
Sida arooryadow ma jiro jacayl ee falka iyo sharci jirin in Love .
Waxaana ugu yeedhi inaad ka fikiraa, kuwaas oo kala duwan asaasiga ah ee Love iyo sharciga Ilaah oo arooryadow.
Marka iimaanka waxa ay u adeegi karaan in aad fikirka haddii aad ugu adeegtaan Ilaaha adeegi arooryadow!
In Love Ilaah jiraan ku fikradaha dambi dhaaf, naxariistay, Khashuue ah iyo in la wadaago.
In Sharciga Ilaah waxaa jirta fikrad waxgarashada, xubinnimada iyo dayactirka.
In Love arooryadow aan sharciga lahayn ay jirto fikradda ah tumaya iyo damaca.
In sharciga la’aantiis Love arooryadow hor fikradaha ah talisnimada iyo gurigii addoonsiga.
In iimaanka jiro note ee saa’ixiinta ah, xayi ah, jacaylka iyo ixtiraamka sharciga.
Marka rumaysadkiinna waxaa ay u-adeegidda Ilaah , ka dibna waa farxad daahir ah in ay Ilaah u adeegi by caawinta walaalaha iyo difaacaneysa our kiniisaddii iyo Rumaysad noo awoodaan.
Laakiin markii iimaanka in waxaa la dhigay si ay hawsha arooryadowwaxay bedelaysaa kuwa hay Murtadinta dhabta ah, argagixisada, jihaadka iyo waxa u dhexecya kale xun.
Jidka si ay Ilaah waa cidhiidhi ah sida irbad daloolkeed ka duso iyo jidka this maraa oo kaliya xagga Ciise Masiix.
« Anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha, ninna waa u imanayaa inuu aabbe u xaggayguu ku yimaado maahee! «
Ereyadan Ciise Masiix waa cawaaqib aad u xun Diimaha oo dhan dunida.
Qofna ma badbaadi doona haddii aan Waa kan jacaylka Ciise Masiix oo taas waa in aan horay u heshiiyaan in ay noqon Christian by baabtiiskii biyaha.
Waxaan leenahay shan iyo toban bilood ah si ay u sugto soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix at Easter April 2, 2018.
Laakiin Ilaah keliya go’aansado taariikhda of this soo laabtay Sidaa darteed laga yaabaa in goor dambe oo laga yaabo in uu noqon doono xitaa ka hor in.
Anyway this laabto waa qaar oo dhici raba iyo in aan u baahanahay si ay u diyaariyaan.
Si aad u diyaariso, waa in aan ku dadaali doonaan inay horay u socdo, noloshay ku dhex xoogga Ruuxa iyo ma by itaaldarrada jidhka.
Weydii inuu Ilaah u tukado inay naga caawiyaan daqiiqad kasta oo nolosheena iyo hanuuniyo talaabo talaabo nolosha our.
Ilaah Weydii Salaadda inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo nafteenna daahiriyaa.
Waxaan ogaan doontaa in 2017 Cadaab weyn on Earth, tani waa xaqiiq ah tan iyo wakhtiyadii dhammaadka xanuunka yihiin marka la barbar dhigo ee Kitaabka Quduuska ah in ay xanuunka dhalmada oo sidaas daraaddeed sanad walba of dhammaadka wakhtiga waa ka xun ugu dambeeyey.
aqrisid ee dhammaadka wakhtiga Ilaah wuxuu ku noqday by May 14, 1948 oo markii ugu danbeysay ee tagey hadhuudh arki doonaa soo laabashada Ciise Masiix.
U soo ducee maalin walba in Ilaah kama raago this soo laabtay sababtoo ah xanuun iyo dhibaato ma joogsan doonaa si ay u koraan iyo nasiib lid ku ah ay sii wadi doonaan iyo xataa xoojin!
Ka dhig ololkii rumaysadkiinna fiican nalka iyo saliid ka buuxso oo aad qalbigiinna iyo naftiinna u in ay ka gudbaan gudcur ee 2017.
Haddii, sida aan u aaminsanahay soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix waa in lagu sameeyo 2018 (dhamaadka qarniga 70 sano) ka dibna 2017 ma aha oo kaliya doonaa ka xun 2016, laakiin waxa ay noqon doontaa cabsi badan sababtoo ah waxa ay noqon doontaa muddada maalinta cadhada Ilaah.
Maqaalkani waa mid aad u muhiim ah tan iyo markii uu ku dhawaaqay dhici celinta in Earth ee Sayidka sayidyada, King of Kings, Ciise Masiix, ina Ilaah oo keliya oo, waan ku turjumi doonaa luqado oo dhan oo aan ku casuumo Brothers aan jeclahay oo Sisters adduunka si ay u xiriiraan si aad xiriirada oo dhan si dhan waxay leeyihiin aqoon iyo naftiisa diyaariyo.
Brothers Gacaliyayaalow iyo Sisters in Ciise Masiix waxa kale oo aad markhaati ka tihiin Ciise Masiix iyo daafacyada iimaanka iyo Church.
U soo ducee badbaadinta Ilaaheenna nafta, waayo, dhammaan walaalaha iyo in erayga Injiillada aan taabtay oo dhan.
Ilaah ha idin barakeeyo, iyo hanuunin noloshaada.